War hada ah: Dhageyso Maxaa ka jira In Ciidamada Dowlada iyo kuwa Koonfur Galbeed ay Maanta …… – Kismaayo24 News Agency
War hada ah: Dhageyso Maxaa ka jira In Ciidamada Dowlada iyo kuwa Koonfur Galbeed ay Maanta ……
by Tifaftiraha K24 27th June 2016 051
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwo Maamulka koofur galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka Goof-gaduud oo 30km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ciidamada gaarka ah ee Koonfur Galbeed oo ka ambabaxay Magaalada Baydhabo ayaa iska hor imaad kooban waxa ay Shabaab kula galeen duleedka Deegaanka Goofgaduud, kadibna ciidanka waxa ay qabsadeen deegaankaasi.
Guddoomiyaha Deegaanka Goofgaduud Xuseen Wardheere oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay ciidamada iska caabin kooban kadib inay qabsaden deegaanka.
Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in shabaabka ay latageen odayaal kamid ahaa dadka deegaanka Goof Guduud.
Dhinaca kale Taliyaha qeybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Somaliyeed S/Guuto Ibraahim Yarow oo ay SONNA la xariirtay ayaa xaqiijiyay in Ciidamada ay saaka la wareegeen deegaanka isla markaana aan wax dagaal ah la dhicin.
Wasirrka Hub ka dhigista iyo dhaqancelinta Maleeshiyaadka ee Maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa isna sheegay in ay Ciidamada Xoogga Dalka Somaliyeed iyo kuwa Maamulka k/Galbeed ay diyaar u yihiin inay buuxiyaan meelaha ay banneeyaan Ciidamada AMISOM, isagoo xusay in laba goobood oo ay ka baxeen ay si wadajir ula wareegeen, isla markaana ay diyaar u yihiin gudashada waajibaadkooda Ciidan.
SAWIRRO: Madaxweynaha oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha Boqortooyada…..
Daawo: Ajaanibtii laga qabtay Xeebta Kismaayo oo Maanta la soo bandhigay iyagoo ay ka……
Ciidamada Itoobiya oo 9 qof ku dilay Mooyaale
Ahmed sudani 11th March 2018
Dhageyso: Puntland oo sheegtay in alshabaab ay ka aarsata kana dishay 25 askari kadib weerar ay ku qaadeen….
Howlgallo ka dhan ah Qoyska Madaxweyne Jocob Zuma oo ka socda Koonfur Afrika